Beatrice Ask oo dooneysa in baaritaan cusub lagu sameeyo dacwooyinka kufsiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bannaanbax looga soo horjeedo kufsiga. Sawirle: Madeleine Fritsch-Lärka/Sveriges Radio
Beatrice Ask oo dooneysa in baaritaan cusub lagu sameeyo dacwooyinka kufsiga
La daabacay tisdag 28 januari 2014 kl 16.21
Wasiiradda caddaaladda Beatrice Ask (M) ayaa maanta soo jeedisey hindise cusub oo baaritaan cusub loogu sameynayo dembiyada kufsiga. Hindisahaas oo ay u sheegtay idaacadda Ekot, ayey ku dooneysaa baaritaankaas lagu soo qaado arrinta isku waafaqsanaanta marka galmo la sameynayo.
– Waxaan u arkaa in ay wanaagsan tahay in baaritaan lagu sameeyo. Waana sidaas sida aan horey ugu mari karno. Horay ayaan arrintaan laba goor u soo baarnay, laakiin weli waxaa jira meelo mugdi ku jiro iyo dood ku saabsan in dib loo cusbooneysiiyo qaybaha sharciga, ayey wasiiradda caddaalaaddu Beatrice Ask (M).
Dacwooyinka kufsi ah oo raggii lagu eedeeyey laga siidaayey oo waqtiyadii dambe shaki abuuray ayaa horseeday gadood ballaaran iyo in la dalbo in sharciga wax laga beddelo.
Waxay ahayd toban maalmood ka hor markii la qabtay bannaanbax lagu dalbaayo in sharciga lagu daro qodob shuruud ka dhigaya in la isku waafaqsan yahay marka lagu doonayo in galmo la sameeyo.
Jimcihii la soo dhaafay ayuu xisbiga Socialdemokraterna ku dhawaaqay in uu sawir kale ka helay dooddii ku saabsanayd isku waafaqsanaanta.
– Waxaan dooneynna in dib loo eego sharciga khuseeya dembiyada galmada la xiriira. Run ahaantii aragti ayaa nooga soo baxday doodihii socdey, iyo weliba xaaladda cusub ee siyaasadda. Sidaasna waxaa idaacadda Ekot u sheegay Morgan Johansson (S) oo ah guddoomiyaha guddiga caddaaladda ee baarlamaanka.